7 Usoro iji me ka ezumike ezumike gi karie | Martech Zone
Anyị nyere ọtụtụ ozi tupu taa Ahịa ezumike na ụbọchị ndị metụtara ya, amụma na ọnụ ọgụgụ, ugbu a, anyị chọrọ ịkekọrịta infographic na otu ị ga - esi jiri uru ndị ahụ wee mee ka ị gbanwee ntụgharị ntanetị n'oge ezumike.
Ọ bụ oge ahụ n'afọ ọzọ! Ezumike ịzụ ezumike ahụ amalitela ịmalite. ShortStack mechie nchịkọta ọnụ ọgụgụ (25!) Banyere ọnọdụ ịzụ ahịa, gbakwunyere echiche ole na ole maka Mgbasa Ozi nke ga - enyere gị aka ijikọ ọtụtụ ndị Fans na ndị na - eso ụzọ gị n'ime izu ole na ole sochirinụ.
A ka nwere ọtụtụ oge iji nye onyinye n'ọnụ ụzọ n'ihi ya ugbu a bụ oge iji nye mkpọsa mbupu n'efu!
Chọrọ ịchekwa ego nke mbupu? Kedu maka ịchụ ego maka ndị ahịa chọrọ bulie zụọ n'ụlọ ahịa gị?
Nye nkwalite site na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe gị nke na-adọrọ adọrọ denye aha site na email yabụ ị nwere ike ịkwanye onyinye na oge niile.
Ugbu a ị nwere ozi ịntanetị ndị ahụ, hazie oge enye otu ụbọchị N’oge ezumike nile.
Jiri uru ime ụlọ ngosi ma nye onyinye a na-eji agagharị agagharị naanị iji zụta ihe n’ime ụlọ ahịa gị!
Ikwu okwu banyere mkpanaka, kpachara anya idokwa mobile-njikere Kupọns. Ide ederede klọb ka bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ahịa gị belata ego, bido otu ma nye ụfọdụ Kupọns na ezumike niile.
Jiri oge ịzụ ahịa were oge wee bido ogologo oge nchịkọta n'ihi na ndị debanyere aha email gị ka ha debanye aha ma na-arụsi ọrụ ike na ozi ịntanetị ị na-ezipụ.
Tags: egombupu n'efuezumike ezumikeịzụ ahịa ezumikemelite ahịamụbaa ahịamobile dereonyinye ekwentịenye otu ụbọchịịzụ ahịa n'ịntanetịbulie egoegosinchịkọta